China Yakanaka tsika wakisi chisimbiso chidhindo akasiyana-siyana mubato vagadziri uye vatengesi |Washi Makers
Yakanaka tsika wakisi chidhindo chidhindo chakasiyana mubato
25 ~ 99 / chidimbu
Product Code: Wax chisimbiso
Bulk Nguva Yakatenderedza 15 - 20 mazuva ekushanda.
Zvese zvedu Wax Seal Stamp zvinouya nemusoro wakasimba webrass chitambi chinogadzirwa kubva pabillet rimwe chete rebhurasi.
Dzinouya mumarudzi akawanda akasiyana-siyana, zvinhu, maumbirwo uye saizi.Saizi yakajairika i25mm kana 30mm, uye inogona kupa mubato wemapuranga kana macaron.
▲ Pachave nemusiyano wemavara pakati pehumbowo hwedhijitari & chaihwo chakadhindwa chigadzirwa?
▼ Hongu, unogona kutarisira kuti matepi ako apera ewashi ataridzike akati siyanei muruvara kuchiratidzo chako chedhijitari.Izvi zvinodaro nekuti mavara aunoona pakombuta yako mavara eRGB ukuwo matepi ewashi anodhindwa uchishandisa CMYK mavara.Isu tinogaroona kuti mavara ari pachiratidziro chako anozonyanya kusimba pane pane akadhindwa washi matepi.
Zvakapfuura: China Yakanyanya Kutengesa Chigadzirwa Bhasikoro Bhasikoro Yakaumbwa makiyi cheni Personnalisable Aluminium Keyring
Zvinotevera: 3 mavara A4 A5 Kaviri Sided Spiral Storage Book for Stickers Tepi Inoburitsa Pepa Notebook
Dhinda Chitambi Washi Tape
3 mavara A4 A5 Kaviri Sided Spiral Storage Book...
2020 Stickers YeNotibhuku Karenda Chiyeuchidzo Mo...
Mabhomba Ghost Pins Black Skeleton Hug Muroyi Muroyi...
Nyowani Dhizaini Masking Chinese Style Retro Kusvika...
Anime Foil Kudhinda Pepa Tsika Washi Tape Aus...